Banyere Anyị - Gormeet Plastic Products Co., Ltd
Gormeet manufactures igbu ịkpụzi ngwaahịa maka eduga ụlọ ọrụ na ndị ọzọ na ahịa karịa ihe ọ bụla ọzọ igbu kpụrụ. Anyị nwere injinia na ihe karịrị afọ 20 nke ahụmahụ nke nwere ike inye igbu ịkpụzi ngwọta maka n'okpuru ọrụ ahịa:
Hardware- Anyị arụpụtara ọtụtụ puku ngwá ọrụ ikpe, anyị bụ ndị ọlaedo soplaya Stanley, Blacke & Decker maka afọ.
-Indoor na n'èzí ngwá ụlọ
-Seating na oche
-Other ọrụ na ngwaahịa
Ọ bụla ahịa ma ọ bụ ọkara ahịa arịrịọ, anyị sara mbara ahụmahụ na imewe na imewe nke igbu ịkpụzi plastic ngwá ọrụ ikpe na omenala igbu ịkpụzi ngwaahịa ga-akpan owo unu mgbe ọ bụla na ogbo nke gị oru ngo.
Obi na-abịa site n'aka ndị ọrụ, anyị na-a na-eduga emeputa nke Fụọnụ ịkpụzi ngwaahịa na emeputa plastic ngwaahịa na-eji na a dịgasị iche iche nke ahịa na ulo oru ngwa.
Kpọtụrụ Anyị maka ịfụ Kpụrụ Solutions.